Lalam-by fiaran-dalamby tsy ho voarindrina ao amin'ny Duzce Istanbul Street - RayHaber
HomeTORKIAFaritra mainty hoditra81 Duzce TorkiaLalam-by fiaran-dalamby no alefa aloha any amin'ny Duzce Istanbul Street
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 81 Duzce Torkia, Railway, ANKAPOBENY, Faritra mainty hoditra, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, TORKIA, tram 0
lalamby lalamby no hampidirina voalohany eny amin'ny arabe duzce istanbul
Ben'ny tanàna ao Düzce, izay nanomana tetikasa ho an'ny làlana Istanbul. Faruk Özlü, nanosika ny bokotra ho an'ny fampiharana ny tetik'asa vaovao. Ny tetik'asa telo andalana vaovao eny an-dalana dia hanala ny lalamby. Noho izany, hikatona ny làlana mankany 8: 22: 00 ka 10: 00: 00:
65. Ny minisitry ny siansa, ny haitao ara-indostria ary ny ben'ny tanàna ao Düzce Faram Özlü dia nanindry ny bokotra ho an'ny fampiharana ny tetikasa voaomana ho amin'ny lalana İstanbul.
Duzce Munisip dia manomboka miasa amin'ny tetik'asa vaovao hotanterahina eny amin'ny làlana Istanbul. Ny lalamby fiakarana no hatsangana aloha ho an'ny fampiharana ny tetikasa vaovao, izay misy ny fifamoivoizana fiara, mpandeha an-tongotra ary mpampiasa bisikileta eny an-dalana. Nanatontosa ny raharaha any amin'ny toeran'ny Düzce Munisipaly, nanoratra ny talen'ny sampana miandraikitra ny sampana miadidy ny polisy ao amin'ny Düzce.
Voaroaka ny lamosin'ny lamasinina ho fanatanterahana ilay tetik'asa telo làlana vaovao teny an-dalana. Nosoratana tao amin'ny taratasy ofisialy momba ny asa tokony hatao amin'ny làlan'ny bisikileta nokasaina hatao amin'ny ankavia amin'ny lalana mikoriana eny an-dalambe, nomena izao fanambarana manaraka izao: "Satria ny lalana dia halamina ary ny asphalt asa amin'ny Düzce Merkez, Street İstanbul ao amin'ny kaominina, manomboka amin'ny lalana ny 08 / 10 / 2019: 22: 00: 10. 10 / 2019 / 00 sy ny daty 00: mangataka izahay mba hikatona mandra-pahatongan'ny 09 (10 / 2019 / 00 mandritra ny andro alarobia ary misokatra ho an'ny fifamoivoizana amin'ny alina 00: XNUMX). ”
Düzce Munisipaly dia nilaza fa ny asa eny an-dalambe dia ho vita eo anelanelan'ny daty voatondro tao amin'ilay lahatsoratra, noho ny fisaorana ireo olom-pirenena izay mora tohina nandritra ny asa.
Notazonina ny fampisehoana fiara an-dalamby Düzce Istanbul 04 / 08 / 2017 Ao anatin'ny tontolon'ny tetikasa Fanapariahana, ny fampihetseham-pandriampahalemana izay hitsoka ny làlambe Istiklal Street ao Beyoğlu ao Istanbul Street dia notontosaina. Ny fandaniana amin'ny tram-barotra any amin'ny kaominina dia ny 1 million 700 arivo TL. Ny iray amin'ireo tetikasa mpianatra ao Duzce Mayor Mehmet Keles, Lalana Istanbul, izay iray amin'ireo tetikasan'ny asa fitetezam-paritra, dia mitohy. Tranom-Nostalgika izay hanome ny làlan'i Istiklal Street ho eny an-dalambe izay nokasaina haverina ho ivon-toeram-pivarotana malalaka. Ny ben'ny tanànan'i Duzce Mehmet Keles, izay nanapa-kevitra ny hametraka ny tetikasa, izay nofinofin'ny ben'ny tanàna tamin'ny 20 nandritra ny taona maro, saingy tsy afaka nampiharina, dia niteny hoe: acak Ho jobily jobily X sy 4 no nanokatra ny arabe mankany amin'ny fifamoivoizana tamin'ny volana jolay.
Asintatra arivo taonina taonina no hidina eny an-dalamben'i Bornova 23 / 02 / 2015 Asintatra arivo taonina taonina amin'ny alàlan'ny boriboritany Bornova: tanànan'i Izmir no nanao hetsika hanavaozana ny làlana ao amin'ny distrika. Niharatsy ny lalana nanomboka ny fiomanana 25 arivo taonina mafana asfalta hanjaka fitiavana hanavao monisipaly lalana 20 kilometatra ela amin'ny lohany ny rantsan-tongony amin'ny toetrandro mafana no hanavao. Ny arivo taonina 15 amin'ny tolotra mitokana miaraka amin'ny patches dia hatao amin'ny teboka isan-karazany. Ny paty dia hahatratra kilometatra 5. Ny tanànan'i Bornova, ny asphalta arivo taonina amin'ny taom-pilalaovana fianarana manokana dia hamaritra izay lalana ampiasaina. Ankoatra ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ekipa ao an-toerana, ny fangatahana ny olom-pirenena sy ny fangatahan'ny mpikatroka dia hodinihina. Mukhtars dia takiana amin'ny lohahevitra ...
Any Düzce, ny làlan'i Istanbul dia hikatona amin'ny fifamoivoizana ary ny fifindrana mankany amin'ny lalamby dia hatao. 19 / 07 / 2012 Ny ben'ny tanàna Düzce Ismail Bayram, Lalana Istanbul taorian'ny fikatonan'ny fifamoivoizana amin'ny lalamby, nilaza fa ny tetezamita dia hatao. Bayram, "Dingana isan-kerinandro, handeha isika", hoy izy. Ismail Bayram, kianjan'ny kianjan'i Istanbul no nanakana ny fifamoivoizana niarahan'izy ireo tamin'ny fanatanterahana ny fanombanana ny asa natao. Ao amin'ny kabariny mikasika ilay tetikasa voavolavola, hoy ny filoha, "Ny tetikasa misy antsika dia ny hanakatona ny arabe mankany amin'ny fifamoivoizana ary hametraka ny lalamby. Nolazainay fa handeha amin'ny dingana arahina izahay mba hahatongavana amin'io teboka io. Nanangona fiara izahay. Ankehitriny dia miomana amin'ny fampiharana ny lalamby isika. Mazava ho azy fa mitaky vola be izy rehetra. Fandaharan'asan'ny lalamby, fanadihadiana amin'ny ho avy. Io fandaharana io dia salama ...
Duzce Istanbul Làlana nanokatra ny fiara fitateram-bahoaka 04 / 12 / 2018 Tokony ho tamin'ny taona 1.5 taona lasa izay dia nakatona ny làlan'ny fiara ho an'ny fiara fitaterana an-dalamby ny làlan'ny fiara fitaterana an-dalamby tamin'ity maraina ity. Dursun Ay, Ben'ny tanànan'i Düzce, izay naharay vaovao tamin'ny finday, dia nanazava fa naverina naverina tamin'ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera Mahaleotena Provincial ny làlana. Ny fanapahan-kevitra dia nanindry fa ny fangatahana mafy avy amin'ny vahoaka manoloana ny fanokafana ny fifamoivoizana dia ny vokatra. Ny fivoarana efa nandrasana volana maromaro dia lasa ofisialy tamin'ny fanapahan-kevitry ny "Komitim-pitaterana provincial". Notokanana ho an'ny fifamoivoizana-dia mbola hanokatra mandritra ny volana maromaro, mbola mitohy ny fifanakalozan-kevitra amin'ity volana ity, ny toeram-pivarotana Istanbul indray dia misokatra indray mandeha handalo ny fiara. FOTOPOTOTRY NY MPITORY Dursun Ay, Ben'ny tanànan'i Düzce, izay nahazo anay tamin'ny alàlan'ny finday, nilaza hoe:
Lalan'ny bisikilety hamboarina amin'ny alàlan'ny fanesorana ny lalamby ao Düzce 07 / 08 / 2019 Düzce Munisipaly, Istanbul Street dia nanao fanambaràna momba ilay tetikasa nomanina. Nanjary hita miharihary ny halavan'ny lavareny lavareny. Ao anatin'ny sehatry ny tetik'asa, dia hatao ny fandinihana mba hamporisihana ny fampiasana bisikileta fa tsy mitondra fiara any afovoan-tanàna. Minisitry ny Siansa, Indostria, Teknolojia ary Ben'ny tanàna ao Düzce Tamin'ny andro voalohany nanendrena azy dia nanatanteraka ny fepetra fifehezana ara-bola ny Faruk Özlü ary nanome ny laharam-pahamehana ho amin'ny fanavaozana ny tetibola. Nandritra ny vanim-potoana fifidianana, ny filoha Özlü, izay nametraka ny sandriny ho an'ny tetikasa maro niresahany, dia nanosika ny bokotra ho an'ny fananganana indray ny làlana Istanbul ao afovoan-tanàna. Ben'ny tanàna Özlü, izay nifampidinika hatrany tamin'ny mpivarotra ara-paritra, olom-pirenena ary solontenan'ny ONG,
Notazonina ny fampisehoana fiara an-dalamby Düzce Istanbul
Asintatra arivo taonina taonina no hidina eny an-dalamben'i Bornova
Any Düzce, ny làlan'i Istanbul dia hikatona amin'ny fifamoivoizana ary ny fifindrana mankany amin'ny lalamby dia hatao.
Duzce Istanbul Làlana nanokatra ny fiara fitateram-bahoaka
Lalan'ny bisikilety hamboarina amin'ny alàlan'ny fanesorana ny lalamby ao Düzce
Hitsoka ny rivotra i Duzce Istiklal
Ny làlan'i Bursa Tram dia halefa any Siteler avy amin'ny lalana Tayyareci Mehmet Ali sy ny lalana Selçukbey.
"Ground" Ground mankany amboalohany tram-baravarankely eny amin'ny Lalana Istiklal
Fientanam-panenjehana any Bursa ... Dingana voalohany Tram Street Cafes ao amin'ny arabe Cumhuriyet
Fifamoivoizana mankany amin'ny fivarotan-dàlana ao Istanbul